News Collection: 'दसैंमा कुर्ता नै ठीक'
'दसैंमा कुर्ता नै ठीक'
सदिक्षा श्रेष्ठ (मिस नेपाल २०११)- ठूलाबडाको हातको टिका थाप्नुपर्ने भएकाले भद्र देखिने लुगा लाउँछु। फिटिङ जिन्स, निलेन्थ स्कर्टमा अप्ठेरो लाग्छ। त्यसैले हरेक दसैंमा कुर्ता नै लाउँछु।
अरू बेला यस्तो लुगा लाउने मौका कहाँ मिल्छ र! जिन्स लायो, काममा दौडियो।
हेमा श्रेष्ठ (मोडल)- पहिले जिन्स लगाउँथे। यसपाला कुर्ता लगाउने योजना छ। पहेँलो रङको कटन कुर्ता बनाउन दिएकी छु। एम्ब्रोडरी गरेकोभन्दा साधारण कुर्ता नै लाउन मनपर्छ। दसैंजस्तो चाडका बेला ट्राडिस्नल पहिरनै राम्रो तर साडीभन्दा कुर्ता नै सजिलो।
उषा खड्गी, (फेसन डिजाइनर)- साडी र कुर्ता लगाउने बेला नै दसैं हो जस्तो लाग्छ। सप्तमीसम्म काममा जानुपर्ने भएकोले कुर्ता लगाउँछु। त्यसउता साडी लाउँछु। चाडबाडमा आफैं खटिनुपर्ने भएकाले त्यहीअनुसार साडी बनाएकी छु। जसलाई लगाउन मेहेनत गर्नु पर्दैन, हुक लगाए पुग्छ।
निलिमा शर्मा (फेसन स्टाइलिस्ट)- यसपाला लेहेङ्गा लगाउने सुरमा छु। पहिलेजस्तो साडी, कुर्ता लगाउन मन छैन। सधैं उस्तै लुगा के रमाइलो होला र! नयाँपन ल्याउन आफैंले ढाकाको लेहेङ्गा तयार पारेकी छु। नेपालीपन झल्किने, फरक पनि देखिने।
माला सुब्बा (अभिनेत्री)- सिंगापुरमा हुर्किएकीले पहिले जिन्स र टिसर्टमै दसैं मनाइन्थ्यो। नेपाल आएयता हरेक दसैंमा कुर्ता नै लाउँछु। अरू बेला कुर्ता लगाइन्नँ, दसैंमै साइत जुर्छ। जडी गरेको लुगा खासै मनपर्दैन। सकेसम्म प्याचवर्क वा प्रिन्टेड कुर्ता नै रोज्छु।
नन्दिता केसी (अभिनेत्री)- दसैंमा कुर्ता सजिलो र राम्रो लाग्छ। पाइन्ट र टिसर्टमा ठूलाबडाको आशीर्वाद थाप्न मन मान्दैन, सायद संस्कारले होला। दसैंमा रातो नै राम्रो। यसपाला पनि मैले रातोमा हरियो रङ मिसाइएको कुर्ता किनिसकेकी छु।